ukufakwa kokushisa kwezicelo zezokwelapha nezamazinyo zomkhakha wezokwelapha
Induction Ukushisa izinhlelo zezokwelapha nezamazinyo-izinhlelo zokushisa zokungeniswa kwemboni yezokwelapha neyamazinyo
Ukushisa ukushisa isetshenziswa kabanzi ngaphakathi kwezimboni zezokwelapha nezamazinyo. Abakhiqizi bemishini yezokwelapha bayazuza kubuchwepheshe bokushisa bokungeniswa. Inikezela ngokuhlanzeka, okufishane, okuphindaphindwayo, futhi kuphephile kwezemvelo ngenxa yokuthi akukho langabi elivulekile noma ukukhishwa kobuthi. Isetshenziswa kuma-laboratories amancane kanye nasezikhungweni ezinkulu zokukhiqiza.
Eminyakeni yamuva izikhungo zocwaningo lwezokwelapha ezengeziwe zisebenzisa ukushisa kokungeniswa kocwaningo lwe-nanoparticle ne-electromagnetic hyperthermia treatment. Imishini yokufudumeza ye-HLQ DW-UHF yakhelwe ngqo ngalolu hlelo lokusebenza engqondweni. Izinhlelo zokufudumeza zokungeniswa ze-HLQ zisetshenziswa emaNyuvesi amaningi nasezikhungweni zokucwaninga emhlabeni wonke.
Kusetshenziswa kanjani ukushisa kwe-Induction Ezimbonini Zezokwelapha Nezamazinyo?
Ukucwaninga nokuhlolwa kwe-nanoparticle ne-hyperthermia
Ukwenziwa kokufakwa kwamazinyo okufakelwa nokufakelwa kwezokwelapha
Ipayipi le-catheter lakha amathiphu we-catheters yezokwelapha
Ukubulala inzalo kokuxhuma ekwenziweni kwemithi noma kwemvelo
Ukwelashwa okushisayo kwama-alloys enkumbulo kwezicelo zezokwelapha
Izinaliti nezinsimbi zokuhlinza ukushisa ukwelashwa nokushisa ukushisa
Imithi noma ukushisa kwe-plasma yegazi kumadivayisi we-IV
Izinhlelo Zokushisa Zokungeniswa zisetshenziselwa izinqubo eziningi ngaphakathi kwezimboni zezokwelapha. Uhlobo lwezicelo zokushisa ze-Induction ozozithola zingamathiphu we-catheter ukwakha, ukubhoboza amazinyo ukubhoboza, ipulasitiki ekuhlanganisweni kwensimbi nokunye okuningi.
Kunezinzuzo eziningi zokusebenzisa i-Induction Heating ngaphakathi komkhakha Wezokwelapha. Izinzuzo ziyinqubo yokushisa engaxhunyanisiwe ehlanzekile kakhulu esebenza kahle ngogesi nenqubo yokushisa efudumele kakhulu. Ukushisa kwe-induction kuyindlela eshesha kakhulu yokushisa izingxenye zakho ngendlela eduduzayo. Lokhu kuzosiza ukuthuthukisa ukungena kwakho komkhiqizo futhi kuthuthukise ikhwalithi.
Izixazululo ze-induction coil zineminyaka eminingi yolwazi ngaphakathi kwemboni yezokwelapha esekela amakhasimende ngomsebenzi omusha wokuthuthukisa nokusiza ngemiklamo emisha yamakhoyili wezinto ezintsha. I-Induction coil Solutions futhi isize izinkampani eziningi eziluhlaza okwesibhakabhaka ngokugcina imigqa yokukhiqiza isebenza ngamakhoyili amasha we-Induction Heating, noma ama-Coil Heating Heating.
Izixazululo Zokukhiqiza Zezokwelapha Nezamazinyo
Emnothweni womhlaba wonke okhuphuka ngokuncintisana, izinkampani ezikhiqiza imishini yokwelapha zihlala zifuna izindlela zokwehlisa izindleko zokukhiqiza nokusheshisa isikhathi sokumaketha. Ngasikhathi sinye, ikhwalithi yomkhiqizo ethuthukisiwe kanye nokuvumelana kokukhiqiza kubaluleke kakhulu; azikho izinqamuleli lapho impilo nenhlalakahle yesiguli kusengozini.
Abakhiqizi bedivayisi yezokwelapha baphendukela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokufakwa kwe-induction ukusiza ukuhlangabezana nezinjongo zabo zokukhiqiza, izindleko kanye nekhwalithi. Ukushisa kwe-induction kuyindlela esheshayo, ehlanzekile, engathinti yokunciphisa ukushisa kwezinhlobonhlobo zensimbi yokujoyina nokusetshenziswa kokushisa. Uma kuqhathaniswa ne-convection, i-radiant, ilangabi elivulekile noma ezinye izindlela zokushisa, ukushisa kwe-induction kunikeza izinzuzo ezinkulu.
Ukungaguquguquki okwandisiwe ngokulawulwa okuqinile kwesimo sokushisa kanye nezinhlelo zokuqapha i-loop evaliwe
Ukukhiqizwa okuphezulu nokusebenza kwe-cell; asikho isikhathi sokungena noma imijikelezo epholile ende
Ikhwalithi eyenziwe ngcono nge-warpage yomkhiqizo encishisiwe, ukuhlanekezelwa kanye namanani enqabe
Impilo yokulungiswa enwetshiwe ngokushisa okuqondene nendawo ngaphandle kokushisa noma yiziphi izingxenye ezizungezile
Imvelo ezwakala ingenamalangabi, intuthu, ukushisa kwemfucuza, ukukhishwa okuyingozi noma umsindo omkhulu
Ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla kuze kufike ku-80% wokusebenza kahle kwamandla
Phakathi kwezicelo eziningi zokwenziwa kwamadivayisi wezokwelapha zokufudumeza kokungeniswa:
I-Annealing Incoloy Tubing Esimweni Esivikelayo
Ngamandla kagesi angama-20kW, Ukushisa ukufakelwa ingasetshenziselwa ukushisa i-tubing yensimbi iye ku-2000 ° F yokwehliswa ngesilinganiso esingu-1.4 amayintshi ngomzuzwana.
Izingxenye ze-Brazing Steel Orthodontic
Kulolu hlelo lokusebenza sisebenzise isimo se-inert ukubopha amaqoqo wezingxenye ze-orthodontic ku-1300 ° F kungakapheli umzuzwana owodwa
Ukusetha Ukushisa I-Nitinol Medical Subtends
Ukushisa kwe-induction kwakusetshenziselwa ukushisa ukusetha ama-stents ezokwelapha kwi-mandrel ukusetha usayizi ofanele ngemizuzu emibili ku-510 ° C
IBrazing Izindawo Ezintathu Ezihlangene KuJet Prophy Jet
Ngakwesokudla ukukhishwa kwe-coil yokufakelwa kwe-coil, kungenzeka ukubopha amalunga amathathu ngasikhathi sinye. Ngemizuzwana eyishumi, amalunga amathathu emhlanganweni we-dental prophy jet Assembly afudunyezwa afinyelela ku-1400 ° F wokubopha ngokuvumelana okungcono kwesivuno nesikhathi esincishisiwe somjikelezo.
Ukushisa Ukushisa Isixhumi Esenziwe Nge-Brass Esikagesi KuShell Yepulasitiki
Imiphumela engaguquguquki, ephindaphindwayo itholwe ku-500 ° F ngomjikelezo wesibili wokushisa wesibili. Isixhumi sikagesi sasiboshwe saqina kugobolondo lepulasitiki ngaphandle kokukhanya noma ukushintsha kombala.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi Ukushisa ezokwelapha, I-HF brazing yezokwelapha, ukwelashwa kwe-induction brazing, ukufakwa kwamazinyo ukushisa, ukufakwa kwamazinyo okushisa, ukufakwa kokushisa kwezokwelapha, ukufakelwa kwamazinyo kwezokwelapha okushisayo, lokungeniswa Ukushisa umkhakha wezokwelapha, ukufakwa kokushisa umshini wezokwelapha, lokungeniswa heater yezokwelapha, i-heater yokungeniswa kwezokwelapha Imeyili kwemikhumbi